Sweden oo ka cabsi qabta weeraro argagixiso | Somaliska
Sweden oo ka cabsi qabta weeraro argagixiso
Ka dib weerarkii ka dhacay Denmark maalintii sabtida ee lagu weeraray ninka Swedishka ah ee Lars Vilks iyo kaniisada Yuhuuda ayaa dowlada Sweden ku dhawaaqday in kor loo qaadayo amaanka, iyadoo qaasatan booliska ay ilaalo gaar ah ka qaban doonaan goobaha ay leeyihiin dadka Yuhuuda ah.
Raysal wasaaraha Sweden Stefen Löfven ayaa weerarka ka dib telefoon u diray dhigiisa Denmark, isagoo sheegay in aysan dowladiisa balan qaadi karin in arintaan oo kale aysan ak dhicin Sweden. Sweden ayaa hada ku sugan xaalad foojignaan ah iyadoo la ogyahay in ragg badan oo ka soo dagaalamay Syria iyo Iraq ay dib ugu soo laabteen Sweden lagana cabsi qabo in ay weeraro ka geystaan halkaan.
Weerarka ka dhacay Denmark ayaa la sheegay in uu geystay wiil Falastiini ah oo magaciisa lagu sheegay Omar Abdel Hamid El-Hussein kaasoo ku dhashay magaalada Copenhagen. Wiilkaan ayaa la sheegay in uu si aad u ah u xiisayn jiray arimaha Falastiin iyo Israel, isagoo warbaahinta qaar ay sheegeen in uu aad u necbaa Yuhuuda.
1000 Muslimiin ah oo isku hareereeyay kaniisada Yuhuuda ee Oslo
Da’da hooyada oo la sheegay in ay saameyso horumarka caruurta
Dadka cusub oo luuqada (SFI) lagu bari doono kaamamka